Archive du 20190425
Marc Ravalomanana “Tsy mandroso isika raha tsy manaja lalàna”
Mbola nanamafy indray i Marc Ravalomanana tany Andramasina omaly fa tsy azo atao amboletra ny fanovana ny lalàmpanorenana. Ny fitsapan-kevi-bahoaka dia mangataka ny hevitry ny vahoaka no dikany hoe: Eny sa Tsia, hoy izy.
Fifidianana eto Madagasikara Teboka maro mila hatsaraina, hoy ny Eoropeanina
Namoaka ny tatitry ny fanaraha-maso nataony tamin’ny fifidianana filoha teto Madagasikara ny 7 novambra sy ny 19 desambra ny Iraka mpanara-mason’ny Vondrona Eoropeanina (MOUE) omaly alarobia 24 aprily.
Fitsapan-kevi-bahoaka Tsy maintsy atao na iza faly na iza tezitra
Tongotra mby an-dakana ny fanatanterahana ny fitsapan-kevi-bahoaka hikitihana ny lalàmpanorenana ho an’ny mpitondra fanjakana matoa efa tontosa omaly maraina teny amin’ny CENI teny Nanisana ny fisarihana ny filaharan'ny fandraisam-pitenenan'ireo komity mpanohana ao amin'ny haino amanjerim-pirenena.
Tsy nanaja ny minisitra Rakotondrazafy Mpiasan’ny TVM sy RNM miisa 8 noroahina
Tsy fanajana sy toetra tsy mendrika tamin’ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Rakotondrazafy sy ireo
Kianja ivelany etsy Mahamasina Nodiovina sady nolokoina
Taorian’ny fetin’ny Paska lasa teo dia nanatanteraka asa fanadiovana sy fandokoana ny kianja filalaovana baskety baolina sy voley baolina etsy Mahamasina,
Fifanolanana momba ny kianjan’Anosizato Mangataka onitra 60 tapitrisa ariary ilay Karana
Hivoaka ny 8 mey ho avy izao ny didim-pitsarana mahakasika ilay raharaha kianjan’Anosizato novidiana teratany karana mpanam-bola iray ka nitoriany ny filoha nasionalin’ny Hafari Malagasy ho nanao fandrahonana ho faty ireo mpiasany eo ambany fiadidiany.
Fitazonana basy tsy misy alalana Nahazo fahafahana vonjimaika ilay depiote
Naharitra ora maro ny fiakarana fampanoavana mikasika ny raharaha fitazonana basy tsy nahazoana alalan’ny depioten’Isandra teo aloha sy ireo roalahy mpiambina azy ary ilay mpivarotra basy, tao amin’ny Fitsarana Fianarantsoa omaly.
Mpilalaon’ny Club M sy Scorpions de Madagascar fahiny Hiakatra ny kianja indray
Avy amin’ny tsirin-kevitr’i Menakely Ruphin no nanambarany fa hatsangana tsy ho ela ny fikambanan’ireo mpilalao fahiny nandrafitra ny Club M sy ny Scorpions de Madagascar tamin’ny fotoan’androny.
Paul Pogba Hifindra any amin’ny Real Madrid
Hifarana amin’ity taom-pilalaovana ity ny hilalaovan’ilay kintan’ny baolina kitra Frantsay, Paul Pogba tompondaka eran-tany 2018, ao amin’ny ekipan’ny Manchester United Anglisy, araka ny nambarany tamin’ireo namany ao amin’ny Red Devils.
Atrikasa akademika AISS-CNaPS Hitarina ny sokajin’olona homena fiahiana ara-tsosialy
I Madagasikara no mampiantrano ny atrikasa akademikan’ny AISS (Association Internationale de la Sécurité Sociale) ka etsy amin’ny foibe CNaPS Ampefiloha no nanatanterahana izany nanomboka omaly alarobia 24
Mitsimbadika ambony ambany !
Ny olona sy ny fiarahamonina no natao hofehezina sy natao hanaja ny lalàna mba hampirindra sy hampilamina ny tany.
Mpanao “kidnapping” Mpivady sy mpianadahy niara-nidoboka am-ponja
Mpivady tsy mbola niteraka sy mpianadahy no tra-tehaky ny zandary tamin’ny fanatanterahana fakana an-keriny ka samy efa nidoboka any am-ponja vonjimaika.
Aferana basy, toaka gasy ary vola 3 miliara ariary Nidoboka am-ponja koa ny depioten’i Mahabo teo aloha
Nosamborin’ny miaramila afak’omaly ary naterin’ireo mpampandry tany tany amin’ny zandary niaraka tamin’ny zanany ny solombavambahoakan’i Madagasikara teo aloha voafidy tao amin’ny distrikan’i Mahabo sy ny lehilahy nipetraka tao aminy.
Mpanendaka mitaingina moto Mikendry ireo olona leon’ny fitohanana amin’ny hariva
Mitady hevitra hatrany ireo mpanendaka eto amintsika mba hahazoany vola sy kojakoja entina mody isan’andro. Ankoatra ny sinto-mahery sy ny fanendahana ataon’izy ireo mahazatra dia fantatra fa manomboka mampiasa môtô indray izy ireny ankehitriny ka ireo mpandeha avy ao anaty taksibe leon’ny fitohanana amin’ny harivariva iny no tena lasibatra.
Ankizy maro be tsy miditra an-tsekoly Mikaroka vahaolana ny CONAMEPT
Notanterahina nanomboka omaly, haharitra hatramin’ny fiandohan’ny volana mey ho avy izao ny fanamarihana ny herinandro eran-tany ho an’ny hetsika fanabeazana ho antsika eto Madagasikara.
Toekaren’i Madagasikara Nirodana nanomboka ny taona 2009, inona no vahaolana ?
Matroka ny tarehimarika ara-toekaren’i Madagasikara ary voasokajy ho anisan’ny firenena tena marefo izy amin’ny lafiny maro taorian’ny fanapotehana sy ny fanonganam-panjakana tamin’ny taona 2009.
Madagasikara Niakatra ho 14 000 ny voafonja tsy voatsara
Nanao fanambarana indray ny Amnesty International (A.I) mahakasika ny fanadihadiana nataon’izy ireo momba ny fitanana am-ponja vonjimaika tsy ara-drariny.